पार्कमा बसेर फोटो शुट गराइरहेका थिए बेहुला बेहुली, त्यसपछि भयो यस्तो घटना, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पार्कमा बसेर फोटो शुट गराइरहेका थिए बेहुला बेहुली, त्यसपछि भयो यस्तो घटना
एजेन्सी। समाजिक संजालमा यतिबेला एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ। जसमा एक नव विवाहित जोडी बाल बाल बाँचेका छन्। बुहुला बेलुहीले विवाहको खाश पललाई क्यामरामा कैद गर्न चाहन्थे। त्यसैले उनीहरु आफ्नो वेडिङ शुट गराइरहेका थिए। तर त्यसक्रममा जे भयो त्यसले दुवैको सासको गति तीव्र भयो।
उक्त भिडियोलाई फ्रेडी हरनानडिज फोटोग्राफी र मिडियाले फेसबुकमा शेयर गरेका छन्। भिडियोमा छेयेन र लुकास दुवै पार्कमा बसेर कुरा गरिरहेका थिए। अचानक बेहुलाले रुखको हाँगो बाँचिएको आवाज सुन्छन्। आवाज आएतिर हेर्ने वित्तिकै दुवै जना भाग्छन् र दुर्घटना हुनबाट जोगिन्छन्।
Couple nearly hit by falling tree branch on wedding day https://t.co/56jcBA0e5j via @YouTube
— vinay saxena (@vinaysaxenaj) July 10, 2018